15 qof oo ku dhimatay weerarka Ambassador Hotel ee Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada).. - iftineducation.com
15 qof oo ku dhimatay weerarka Ambassador Hotel ee Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada)..
aadan21 / June 1, 2016
iftineducation.com – Ugu yaraan 15 qof, ayaa ku dhimatay weerarka galabta lagu qaaday Hotelka Ambassador oo ku yaala Bartamaha Magaalada Muqdisho, halka 50 kalana ay ku dhaawacantay.
Laba ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa ka mid noqday 15-ka qof ee ku dhimatay weerarkan. Xildhibaanadan ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Maxamuud Guure iyo C/laahi Jaamac Xuseen.
Tiro kale oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxaa la soo sheegaya in weerarkaasi ku dhaawacantay. Xildhibaanada dhaawacmay waxaa ka mid ah Xildhibaan Maxamed Cumar, kaasoo dhaawacmay, markii uu dhismaha Hotelka ka soo booday.
Dadka ku dhaawacmay weerarkan, ayaa waxaa siyaabooyin kala duwan loogu qaaday goobaha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho. Inta badan dhaawacyada waxaa la gaarsiiyay Isbitaalka Madiina.
Weerarkan, ayaa sidoo kale burbur baaxad leh u gaystay Ambassador Hotel iyo dhismooyinka kale ee ku dhow dhow. Khasaaraha xoogiisu wuxuu ka dhashay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu qarxiyay afaafka hore ee Hotelkaasi.
Xilligan oo saacadda Somaliya ay tahay 11:10 habeenimo, ayaa waxaa weli gudaha Hotelka laga maqlayaa rasaas goos goos ah, iyadoona uu weerarku u muuqdo mid aan weli la soo afjarin.
Wiil ka baxay Jaamacad oo XAMAR Shaqo loogu diiday Qabyaalad, oo Kenya ay ka Faa’iidaysatay (Daawo)
Godka dunida ugu dheer.